Global Voices teny Malagasy » Ejipta: Libaney iray any Ejipta – Avy amin’ny Fibodoana mankany amin’ny Fanafahana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Janoary 2019 15:37 GMT 1	 · Mpanoratra Tarek Amr Nandika miora
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Israely, Libanona, Ady & Fifandirana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Tsidika, Vonjy Voina
Bilaogera Libaney  nipetraka tany Ejipta nandritra ny fotoana maharitra i Layal El Katib, ary indreto ireo zava-niainany amin'ny maha-Libaney nipetraka tany Ejipta ny tenany:
Nahazatra ahy ny miteny Ejipsiana tany, raha ny marina tsy nisy nahafantatra hoe Libaney aho raha tsy nisy nilaza tamin-dry zareo, tsy nisy (ary mbola tsy misy) tomika ny fiteniko Ejipsiana!
Noho izany, tsy niaina olana aho! Ara-dalàna tsara izany ary nahatsapa tena ho toy ny tany an-tanindrazana aho..Tany am-pianarana, nahazo namana mahafinaritra aho, fianakaviana iray izahay, hitanao ilay miaraka amin'ny namana tsy miovaova isan'andro anatin'ny taona maro ireny, lasa mafy nóho ny fifamatorana amin'ny fianakaviana ray rà ny fifamatoranay satria afaka misafidy ny namanao ianao! Tiako ny andro voalohany tany am-pianarana, mba ahitako ireo olona vaovao fotsiny! Tiako hatrizay ny fiarahana amin'ny hafa ary tsy nanana olana tamin'ny fifangaroana tamin'ny vondrona REHETRA mihitsy aho.
Kanefa iray andro, nisy tranga iray tokana tena nanohina azy niseho tany am-pianarana:
Na izany na tsy izany, nandeha teny ny taona ary manatrika lesona Arabo anaty kilasy faha-6 aho. Tsy tadidiko izay noresahin'ilay mpampianatra fa tadidiko izy niteny hoe “Ary mazava ho azy, fantatsika rehetra fa nobodoan'i Israely i Libanona ankehitriny…”. Tsy tohina tamin'ilay noteneniny aho, fa kosa tohina tamin'ny fihetsiky ny kilasy iray manontolo! Tsy nisy afa-tsy “BOOOOOOO” mafy be arahinà fanondro nitodika taty amiko! Tsy haiko faritana ny fihetsehampoko! Kanefa tena hafahafa sy nanohina ilay izy hany ka tsy nanao na inona na inona aho ankoatra ny nitsiky! Tanatin'io andro io ihany, nandritra ny fakan-drivotra, tadidiko nitomany teo amin'ny soroky ny namako akaiky aho!
Tsy noho ilay resaka fibodoana no nitomaniako, tsy noho ny filazan'ilay mpampianatra fa nobodoina ny tanin'i Libanona iray manontolo sy ny hoe diso izy, nitomany aho satria io no fotoana voalohany indrindra nahatsapako tena ho vahiny, olom-bitsy na mpitsofoka an-tsokosoko!
Ary taona vitsy taty aoriana:
Ary mbola aty Ejipta ihany aho, mbola anatin'io fianarana io ihany, tsy niova ny namako, ny arabe misy ahy…sns. Taona 2000 izao, taona izay nandaozan'ny tafika Sionista ny Tany Libaney ihany ny farany (ankoatra ireo toerana fiompina Shebaa) noho ny fanoherana mahatalajona nataon'ireo Libaney.
Nivoaka izahay ny harivan'io, tsy tadidiko hoe taiza. Kanefa tadidiko fa rehefa tonga teo amin'ny varavaran'ny efitra nipetrahanay izahay, nisy bandy nanatona anay ary niteny hoe “Mabrouk, Rafa3to Rasna” (Izay midika hoe Arahabaina, nanome voninahitra anay Ianareo). Tsy haiko faritana ny fihetsehampoko. Nahatalanjona fotsiny izao izany.
Angamba io olona tsy fantatra io sy namana akaiky vitsy (1 na 2) ihany no mba niarahaba anay. Faly ho ahy ny namako rehefa nilaza izany tamin-dry zareo aho. Tsy dia nahasosotra ahy na tsy niantso aza ry zareo, ary tsy mahasosotra ahy izany na dia izao aza. Hafahafa izahay Arabo! Ireo namako ireo ihany no nanao “BOO” ahy, ary izaho ihany ilay olona nitomany!!! Mbola Ejipta ihany no Ejipta, ary mbola i Libanona ihany no Libanona. Tsy mitombina ve ny tokony hivadihan'ilay BOO ho OEEE?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/20/133661/
 Bilaogera Libaney: http://lebnights.blogspot.com